सदनमा आपत्ति, नियमापत्ति र प्रति–नियमापत्ति
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा अतिरञ्जिनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम बारम्बार हुने गरेको छ । आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद् देवेन्द्रराज कँडेलले ‘सिंहदरबारका जनप्रतिनिधि’लाई निर्मला पन्तका हत्यारा भनेका छन् ।
पूर्व गृहराज्यमन्त्री समेत रहेका कँडेलले पञ्‍चायतकालमा पोखरामा नमिता, सुनिता र निराको हत्याको प्रसंग उठाउँदै सो हत्याकाण्डको तुलना निर्मला पन्तको हत्यासँग गरे । उनले नमिता सुनिताको हत्या दरबारले गराएको भन्दै निर्मलाको हत्या चाहिँ ‘सिंहदरबारका जनप्रतिनिधिबाट’ भएको दावी गरे । उनको अर्काे भनाई पनि थियो– ‘कञ्चनपुरको घटनामा तत्कालीन एसपी र राजनीतिक पहुँचवालाको पहुँच थियो ।’
कँडेलको भनाईको आशय प्रष्ट थियो– सरकारमा बसेकाहरुले नै निर्मलाको हत्या भएको हो । यतिमा मात्र सांसद कँडेल रोकिएनन् । उनले गृहमन्त्रीलाई भने– ‘गृहमन्त्रीजीको घरका चेलिबेटीमाथि निर्मला पन्त जस्तै घटना भएको भए...’।
सदनमा सांसद्ले दिएको यस्तो अनौठो अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाइन् नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले । शान्ताको भनाई थियो– ‘सिंहदरबारबाट घटाइएको घटना भनेर त्यस्तो पनि भन्‍न मिल्छ ? बोल्न नमिल्ने पनि बोल्न मिल्छ त्यत्तिको मान्छेले ? रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ ।’
शान्ताको नियमापत्तिमाथि प्रतिनियमापत्ति गरे कांग्रेसका मिनबहादुर विश्वकर्माले । उनले भने– ‘संसदमा एक माननीय सदस्य बोलिरहेको बेला अर्काे माननीय सदस्यले बोल्न मिल्छ ? एक माननीय सदस्यले बोलेकामा अर्काेले जवाफ दिएर जुहारी गराउन मिल्दैन । नियमापत्ति गर्नुभएको छैन ।’
मिनको भनाई शान्ता चौधरीप्रति लक्षित थियो । शान्ताले नियमापत्ति शब्द प्रयोग गरेकी थिइनन् । यसैमा मिनले आपत्ति जनाए । तर, सभामुख कृष्णबादुर महराले तत्कालै फैसला सुनाए– ‘उहाँको नियमापत्ति नै हो ।’
त्यसपछि महराले भने– ‘माननीयजीले बोलेका विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरौंला ।’ सभामुखको भनाई देवेन्द्रराज कँडेलको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित थियो ।
सिंहदबारमा बसेकाहरुले नै बलात्कार र हत्या गरेको भनी प्रतिपक्षका केही सांसद्हरुले विगतमा पनि सदनमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।